Koobkii Afrika Ee Masar Ku Guulaysatay Oo Laga Xaday Xarunta Xidhiidhka Kubadda Cagta Ee Dalkaas | Kaafi News
Koobkii Afrika Ee Masar Ku Guulaysatay Oo Laga Xaday Xarunta Xidhiidhka Kubadda Cagta Ee Dalkaas
Xidhiidhka kubadda cagta Masar ee magaciisa loo soo gaabiyo EFA, ayaa bilaabay baadhitaan ka dib markii la ogaaday in dhawr koob laga waayey xarunta xidhiidhka ee ku taal Qaahira, waxaana ku jira koobabkaa la waayey koobkii Qaramada Afrika ee rasmiga ahaa.
Masar waxa la gudoonsiiyey koobkaa sannadkii 2010 oo ay ku guulaysatay koobkaas, sidaas awgeedna maadaama ay ahayd markii saddexaad ee ay ku guulaysatay ayaa si aan soo celin lahayn loo siiyey.
Koobkaas oo markii ugu horraysay lagu tartamay ciyaarihii sannadkii 2002, maadaama oo kii ka horeeyey Cameroon oo markii saddexaad ku guulaysatay 2002 la gudoonsiiyey.
Jimcihii ayaa xidhiidhka kubadda cagta Masar sheegay in uu bilaabay baadhitaan lagu ogaanayo sababta koobabkaa dhawr ka ah looga waaway xarunta xidhiidhka.
“Hadii aanu nahay xidhiidhka kubadda cagta ee Masar waxaanu beryahan wadnay dib u habayn ku socotay xarunta guud ee xidhiidhka oo ay ka mid tahay in la bedelo albaabka laga galayo matxafka yar ee taariikhda kubadda cagta Masar. Maamulka naxdin bay ku noqotay in alaabtaasi ka maqan tahay matxafkaa yar”, ayaa lagu yidhi warbixin ka soo baxda EFA.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee EFA ayaa sheegay in koobkii Qaramada Afrika ee Masar ku guulaysatay 2010 uu ku jiro alaabta maqan.
“EFA lama filaan ayay ku noqotay markii aanu ogaanay in koobkii Qaramada Afrika la waayey waxaanan haatan go’aansannay in aanu baadhitaan bilowno” ayuu yidhi Ahmed Shobier oo la hadlayey website caan ah oo ka faalooda ciyaaraha. “Ma jirto cid garanaysa meel uu yaal koobkaasi” ayuu intaa ku daray.
Mar la weeraray xarunta EFA sannadkii 2013 ka dib ayaa koobab badan oo uu ku jiro koobkaa Qaramada Afrika la geeyey qol istoodh ah.
Hase yeeshee, saraakiisha dalkaas ayaa ogaaday in ay raadiyaan dhawaan markii la go’miyey in la dayac tiro kadinka xarunta EFA qol ku yaal oo la dhigay dhawr koob.
Sannadkii 2013 ayaa taageerayaal cadhaysani ku xoomeen xarunta markii qalalaasuhu ka socday Qaahira waxaanay baadheyaashu haatan doonayaan in ay ogaadaan goorta koobabkaa goobta laga saaray wakhtiga ay ahayd.
Xeerarka xidhiidhka kubadda cagta Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo CAF ayaa sheegaya in xulka qaran ee ku guulaysta koobka Qaramada Afrika saddex goor uu koobkaa qaadanayo marka saddexaad oo aanu soo celis lahayn.
Ghana ayaa noqday xulkii ugu horeeyey ee ku guulaysta saddex goor sannadkii 1978, dalka Cameroon ayaa isna noqday kii labaad.
Sida uu dhigayo xeerka CAF xulka ku guulaystaa waxa uu haynayaa koobkaa muddo laba sano ah hadii aanay ahayn markiisii saddexaad, waxaanay haynayaan ilaa inta la qabanayo tartanka kaa uu ku guulaystay ka ku xiga.
Koobka haatan ee ay isku qaabka yihiin kii ay ku guulaysatay Masar ee qaadatay waxa uu gacanta ugu jiraa dalka Algeria oo ku guulaystay tartankii u dambeeyey ee Qaramada Afrika ee lagu qabtay Qaahir kal kore.